Ahoana ny fampidinana dikan-teny tranainy iray ao amin'ny Ubuntu | Ubunlog
Ahoana ny fampidinana dikan-teny tranainy amin'ny fonosana iray (midina) ao amin'ny Ubuntu miaraka amin'ny tsindry vitsivitsy
Na dia matetika misy rindrambaiko ao amin'ny tranokala ofisialin'ny Ubuntu izay efa voasedra tsara, dia misy foana ny fahafahana manavao fonosana iray ary mety tsy mandeha araka ny nantenainay. Mety ho izy ireo ihany koa no mampiditra fanovana izay tsy tiantsika, ka mety tsara ny mametraka indray ny fonosana teo aloha. Afaka atao amin'ny Ubuntu ve izany? Eny, ary amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika anao ny fomba misintona dikan-teny taloha mampiasa ny safidy miaraka amin'ny interface grafika.
Saingy alohan'ny hanohizana dia mila manoro hevitra isika fa tsy ny fonosana rehetra no afaka manambany ary tsy azo alaina afa-tsy amin'ny dikan-teny mbola hita ao amin'ny tahiry ofisialy; rehefa mandeha ny fotoana iray ka esorin'izy ireo ny dikan-teny iray dia tsy azo alaina intsony araka ny hazavainay eto. Ary inona no logiciel ahafahantsika manao ireo fiovana ireo nefa tsy mandalo ny terminal? Ny mpitantana ny fonosana Synaptic.
Ny Synaptic dia ahafahantsika misintona dikan-teny tranainy kokoa amin'ny fonosana iray
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika, raha tsy efa nametraka azy io isika dia ny fametrahana Synaptic. Mba hanaovana izany, sokafy fotsiny ny foibe rindrambaiko, tadiavo ny "synaptic" ary apetraho ny fonosana na terminal ary soraty ny "sudo apt install synaptic" tsy misy teny nalaina. Rehefa tafapetraka dia ny dingana manaraka dia ny fanokafana ny mpitantana ny fonosana. Hisy varavarankely hiseho miaraka amin'ny fampahalalana izay tsy maintsy ekentsika; Raha jerentsika ny boaty dia hiseho indray ny fampitandremana amin'ny manaraka rehefa manokatra ny mpitantana ny fonosana.
Miaraka amin'ny Synaptic misokatra, tsindrio ny fitaratra lehibe ary mitady fonosana, toy ny Firefox ny ohatra. Ankehitriny, mankany amin'ny sakafo "Package" isika ary misafidy "Force version ...".
Hisy varavarankely hisokatra tahaka ity manaraka ity izay tsy maintsy ataontsika safidio ny dikan-teny tianao. Araka ny hitanao, amin'ny fotoana hanoratana ity lahatsoratra ity dia afaka misafidy isika eo amin'ny Firefox 95, ny havaozina indrindra, na ny 93 izay nahatongavan'i Impish Indri tamin'ny fotoana nanombohany. Tsy ao anaty tahiry intsony ny Firefox 94, ka tsy azo apetraka amin'ity fomba ity.
Mba hamaranana dia tsy maintsy tsindrio ny «Ampiharo». Saingy misy ihany koa ny dingana tsy maintsy atao raha tsy tiantsika ny havaozina amin'ny ho avy ny fonosana: miverina amin'ny menu "Package" isika ary misafidy ny "Version Lock". Amin'izany dia hisoroka ny tsy ampoizina ratsy isika amin'ny ho avy, fa ho tavela tsy hisy vaovao ho avy koa.
Ary izao no fomba ahafahantsika misintona dikan-teny tranainy iray amin'ny Ubuntu. dia tsotra sy mora tadidy, ary afaka mamonjy antsika amin'ny aretin'andoha izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Tutorials » Ahoana ny fampidinana dikan-teny tranainy amin'ny fonosana iray (midina) ao amin'ny Ubuntu miaraka amin'ny tsindry vitsivitsy
Ny GNU nano 6.0 dia efa navoaka ary ireo no vaovao
Pop! _OS 21.10 dia tonga miaraka amina interface tsara nohavaozina, fanatsarana isan-karazany ary maro hafa